Norway:Booliska oo diiday mudaaharaadyo loo qaban lahaa ninkii madoobaa ee MN lagu dilay. - NorSom News
Norway:Booliska oo diiday mudaaharaadyo loo qaban lahaa ninkii madoobaa ee MN lagu dilay.
Ilaa 15.000 oo qof ayaa dhowr magaalo oo Norway ah, soo diiwaangaliyay inay rabaan inay ka qeybqaataan mudaaharaadyo cadaalad loogu dalbayo George Floyd oo ahaa ninkii madowga ahaa ee booliska minnesota ay sida guracan u dileen.
Waxeyna dadka rabay inay banaanbaxaan isku balansadeen banaanka hore ee safaarada Mareykanka ee dalkan Norway.
Talisyada booliska magaalooyinka Oslo, Bergen iyo Trondheim ee dalkan Norway ayaa fariimo ay u direen dadka qabanqaabinayo banaanbaxyadaas ku wargaliyay in xanuunka covid-19 awgiis, hal meel aysan isugu imaan karin wax ka badan 50 qof. Waxeyna boolisku diideen inay ogolaansho siiyaan qabanqaabada banaanbaxyadaas.
Sidoo kale maamulada magaalooyinka Bergen iyo Trondheim ayaa sheegay in hadii ay meel isugu imaadaan wax ka badan 50 qof, ay ka dhigantahay in la jabiyay sharciga kahortagista faafitaanka xanuunka Coronavirus.
Xigasho/kilde: Myndighetene nekter støttedemonstrasjoner for George Floyd i Oslo, Bergen og Trondheim
Previous articleMadaxa shirkadan weyn: Guriga ayay shaqaalaha ka shaqeyn karaan.
Next articleDeg-deg: Maxkamada Oslo oo xukuntay kiiska khilaafka maamulka masaajidka Tawfiiq
Trump oo 750$ oo kali ah canshuur u bixiyay 2 sano.
Oslo: Xirashada maradda afka oo waajib laga dhigay iyo qodobo kale.
Keydka NorSom Velg måned september 2020 (50) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)